FAHA-40 TAONAN’NY FFKM Voafidy ny hira faneva sy ny sary famantarana
Tontosa soa aman-tsara ny sabotsy teo tetsy amin’ny Saint Michel Amparibe ny fisafidianana ny sary famantarana sy ny hira fanevan’ny
Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na ny FFKM ao anatin’ny fankalazana ny faha-40 taona niorenany. Ho an’ny hira manokana dia 10 no notsaraina tamin’io sabotsy io raha nahatratra 18 kosa ny sary famantarana. Raha araka ny fanazavan’Atoa Bien Aimée Randrianantenaina filoha mpanampin’ny filoha vaovao amin’ny taona 2020 dia nahafa-po azy ireo tokoa ny vokatra azo. Marobe mantsy ireo Kristianina nandray anjara tamin’izany. Telo tamin’ireo sangan’asa notsaraina ireo moa no nibata ny amboara izay hijanona ho fananan’ny FFKM manokana manomboka eto. Nisy ny loka natolotra ho an’ireo tompon’ny sangan’asa izay marihina fa samy manana ny maha izy azy avokoa. Nampahafantarina tamin’io sabotsy io ihany koa moa ireo olona 12 mianadahy mpikambana ao anatin’ny birao vaovao vao natsangana, tarihin-dRatefiarivony Romule.